Izwe laseMelika limemezela isimo esibucayi ngenxa yesiphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izwe laseMelika lithinteka esivunguvungwini esidale ukuthi kube nesimo esibucayi esimenyezelwe ezindaweni eziningi ezifana ENew York naseLong Island. Iziphepho ezinamandla ezibhaliswayo zidala umonakalo omkhulu, ngoba akusona isivunguvungu esijwayelekile seqhwa, kepha kunalokho kufakwa imimoya enejubane elikhulu, okudala izimo ezinzima.
Sinjani isimo kula mazwe?
1 INew York neLong Island kusimo esiphuthumayo
2 Ukulimala komgwaqo kanye nesikhumulo sezindiza
3 Iqhwa eliningi
INew York neLong Island kusimo esiphuthumayo
Ngokunikezwa kweziphepho ezibhaliswe ekuseni kakhulu, kuthathwe isinqumo sokumemezela isimo esibucayi eNew York naseLong Island. Lesi simo esiphuthumayo sithinta sonke isifunda esiseningizimu futhi sivumela iziphathimandla ukuthi Bangamukela izinqumo ezihamba phambili kunalezo zokuphathwa kwendawo.
Lapho isiphepho esinjalo sihlasela indawo, isimo sesimo esiphuthumayo sivumela amandla akhethekile wombuso ukuthi alwe nalesi siphepho, ngaphandle kwesidingo sokubhenela ekuvunyelweni ngumthetho kanye nokuthola izinkontileka ngqo noma izinsizakusebenza ezidingekayo esimweni sezulu esiphuthumayo.
Ukulimala komgwaqo kanye nesikhumulo sezindiza
Okwamanje, akuhlelwanga ukumisa ukusebenza komgwaqo ongaphansi komhlaba wedolobha laseNew York City, ngoba bayayisebenzisa izigidi zabantu nsuku zonke futhi awukwazi ukwenza ngaphandle kwale nsiza. Ngakolunye uhlangothi, ukuhamba emigwaqweni emikhulu yombuso kungathinteka ngokuvinjelwa kwezimoto ezinzima emabhulohweni nasemigwaqweni.
Ngenxa yeqhwa eliqongelela emigwaqeni nomoya onamandla, kukhona ukubambezeleka kuthrafikhi yezimoto.
Mayelana nezikhumulo zezindiza, lezi ezimbili iNew York City ezimise izindiza zazo ngenxa yesiphepho seqhwa ngenxa yobungozi bokuhamba. Zonke izindiza zikhanseliwe ngenxa yemimoya ephezulu neqhwa. Isikhumulo sezindiza iJFK sithumele umyalezo ngenethiwekhi yezokuxhumana iTwitter, sicela abagibeli ukuthi baxhumane nezindiza ezihambisanayo ukuze bahlele kabusha izindiza zabo. Ngokushesha ngemuva kwalokho, isikhumulo sezindiza iLa Guardia sabika ukuthi naso sithathe isenzo esifanayo.
Kuphelele Izindiza ezingama-483 zikhanseliwe esikhumulweni sezindiza i-JFK kwathi ezingama-639 zalahlwa eLa Guardia.
Imimoya enamandla kakhulu okulindeleke namuhla ukuthi phakathi kwamakhilomitha angama-40 kuye kwangama-56 ngehora ngeziqubu ezicishe zifike kwikhulu. Iqhwa liqale ukuwa ngezikhathi zasekuseni endaweni yaseLong Island naseNew Jersey futhi lithinta iManhattan ngehora lokujaha lapho kuqala khona ukuhamba.
Emadolobheni afana nalawa lapho kuhlala khona amakhulu ezigidi zabantu, isiphepho salesi sitayela sinesihluku ekusakazweni kwezimoto, ukusebenza kwezinhlelo zamaphoyisa, izikhumulo zezindiza, izithuthi zomphakathi, njll.
Futhi, kulindeleke ukuthi bawele usuku lonke ngaphezu konyawo lweqhwa eLong Island nasogwini lwaseNew Jersey, nengxenye eManhattan.
Indawo lapho lesi siphepho sithinta kakhulu khona iseSuffolk County eLong Island. Lesi siphepho sichazwe "njengesiyingozi kakhulu".
ENew York baphinde bamisa amakilasi ezikoleni ngenxa yengozi edalwa ukuthuthela abafundi ezikoleni. Noma imuphi umsebenzi odinga ukunyakaza okukhulu kwabantu nokusetshenziswa kwezimoto ukhanseliwe kulezi zinsuku.
ENew York bekulindelwe namuhla izinga lokushisa eliphansi -4 degrees Celsius, ngomuzwa oshisayo wama -13 degrees ngenxa yemimoya ebandayo, yize ngoLwesihlanu nangoMgqibelo kulindelwe ukwehla okukhulu kwezinga lokushisa.
Ingozi yokusakazeka kwegazi iyabonakala lapho kungabonakali lutho kumamitha ambalwa nje. Umphumela ufana kakhulu noweziqubu zenkungu ezimotweni.
Izimoto ezingcwatshwe ngaphansi kweqhwa, izingane ezincane ezinesibindi ezidlala ngayo, izakhiwo ezimboziwe, amazinga okushisa afudumele nomoya omningi, yi-panorama ebiseNew York okwamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izwe laseMelika limemezela isimo esibucayi ngenxa yalesi siphepho